ओपिडी सेवा ठप्प हुँदा विरामीको विजोग: अस्पतालपक्षद्वारा पुलिस प्रशासनलाई 72 घण्टाको अल्टिमेटम(हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्टसितै) - खबरम्यागजिन
ओपिडी सेवा ठप्प हुँदा विरामीको विजोग: अस्पतालपक्षद्वारा पुलिस प्रशासनलाई 72 घण्टाको अल्टिमेटम(हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्टसितै)
कालेबुङ, 22 मई: डाक्टरमाथि हतापाई गरेको घटनालाई केन्द्र गर्दै आज दोस्रो दिन पनि कालेबुङ जिल्ला अस्पताल तनाउपूर्ण बन्यो। आज दिनभरि नै आरोपीको पक्राउको मागमा अस्पतालका सबै डाक्टर, सिस्टर एवं कर्मचारीहरू घरणामा उत्रिएका कारण अस्पतालको कामकाज पूर्ण रूपमा प्रभावित बन्यो।
अस्पतालका सबै कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेको कारण अन्तत: कालेबुङ जिल्लापाल डा. विश्वनाथ स्वयं आएर अस्पतालपक्षसित बैठक गरेपछि अस्पतालको कामकाज सूचारू गर्नमा सहमति बनेको हो।
‘हामीले यस सम्बन्धमा अस्पतालका डाक्टरहरूसित कुरा गऱ्यौँ, उनीहरूले अस्पतालको कामकाज सुचारू गर्ने भएका छन्-डा. विश्वनाथले भने, ‘हामी आरोपीहरूविरूद्ध उचित कार्यवाही गर्नेछौँ।’
सोमबार दिउँसो कालेबुङ जिल्ला अस्पतालका डाक्टर अभिषेक गौतममाथि हतापाई भएको घटना अघि आएको थियो। एम्बुलेन्समा बिरामी लिएर आइरहेको समय डाक्टरको गाडीले बाटो नछोडेको बाहनामा डाक्टरमाथि हतापाई भएको थियो। त्यसै समयदेखि आरोपी फरार छन् भने अर्कोतिर अस्पतालपक्षले ओपीडी नै बन्द राखेकोले कालेबुङ वरपर क्षेत्रका सैयौँ विरामीहरूले सोमबारदेखि नै सास्ती भोगिरहेका छन्। आरोपीको पक्राउको मागमा सोमबार दिनभरि नै ओपोडी बन्द राखिएको थियो भने आज पनि बिहानेदखि नै अस्पतालका डाक्टर, सिस्टर एवं कर्मचारीहरू प्लाकार्ड बोकेर धरणामा बसेका कारण अस्पतालको कामकाज प्रायः ठप्प भएको थियो। ओपीडी नै डप्प रहेका कारण कैयौँ विरामीले हुनसम्मको सास्ती भोगपरे। यद्यपि जिल्लापाल, रोगी कल्याण समिति अनि अस्पतालपक्षमाझ भएको बैठकपछि अस्पतालपक्षले 72 घण्टाको अल्टिमेटम दिँदै करीब2बजीतिर प्रदर्शन फिर्ता लिएको हो।
‘जनताको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै अनि जिल्लापाल, जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वहरूको आश्वासनको कारण हामी 72 घण्टाको निम्ति अस्पताल सूचारू गर्दैछौँ’-जिल्ला स्वास्थ्य अधिकारी ए. सिमलाङदीले भने, ‘यदि 72 घण्टामा केही भएन भने हामी अरू पदक्षेप लिनेछौँ।’
अस्पतालपक्षले 72 घण्टाको अल्टिमेटम दिँदै आरोपीलाई पक्राउ गरेर उचित कार्यवाही गर्ने माग गरेको छ। यसबाहेक अस्पताल परिसरमा 24 घण्टा पुलिस चेकपोष्ट हुनपर्ने साथै अस्पताल आउने सडकमा अव्यवस्तित पार्किङलाई हटाएर ट्राफिकमुक्त बनाउनुपर्ने भन्दै जिल्लापाल अनि जिल्ला पुलिस अधिक्षकलाई ज्ञापन-पत्र चढाउने ए. सिमलाङदीले जनाएका छन्।
कालेबुङ, खबर, मुख्य समाचार
गैरीबास, 21 जनवरी आइतबारको दिन नवगठित गैरीवास साहित्य मञ्चको...